Dhamaadka Alshabaab!!! | Somali National Television - sntv.so
Home MAQAALO Dhamaadka Alshabaab!!!
Muqdisho(SONNA):—Qaraxii Ka dhacay magaalada Muqdisho ee ugu dhimashada badnaa inta taariikhda la xusuusan yahay, waxa uu ahaa kii ka dhacay 14-ka oktoobar meesha loo yaqaan isgooyska Zope,kaas oo galaaftay in ka badan nolosha 300 oo ruux , islamarkaana la la’yahay 56 ruux sida ay sheegeen mas’uuliyiin ka tirsan xukuumadda FS.
Arintaas ka hortageeda waxaa markii u horaysay isu taagay Madaxweynaha Dawladda F S. Mud: Max’ed C/laahi Farmaajo kaas oo iclaamiyay in dalka uu galayo dhawaan dagaal lagu cirib tirayo kooxda Alshabaab ee umadda soomaaliyeed laf dhuun gashay ku noqotay horumarkeeda.
Waxaan hubaa qof ahaan in Alshabaab falkoodaas ugu dambeeyey ay mideeysay quluubta umadda oo tafaraarukh aan sidaas u buurnayn ku kala jirtay, waxaana guud ahaan dalka iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho laga dareemayaa in ay dul heebhaabayso neecaw xornimo oo sii saadinaysa guusha laga gaari doono Argagixisada alshabaab.
Previous articleWarbixin: Dhamaadka Al-shabaab!!!